Ny fanomezana teknolojia tsara indrindra ho an'ny Fetin'ny ray | Vaovao momba ny gadget
Ny fanomezana teknolojia tsara indrindra ho an'ny andron'ny ray
El Fetin'ny ray Tonga ny 19 martsa ary angamba fotoana mety hanehoana aminy ny fitiavanao azy amin'ny fanomezana mahafinaritra. Izay azo anaovana dia te hanandrana fatratra ianao, telefaona vaovao na fanamafisam-peo vaovao, na koa ny vokatrao voalohany miaraka amina mpanampy am-peo mba hahitanao ireo tombontsoa marobe amin'ny fiasany.
Noho io antony io ary satria tianay ny hanamora ny fiainanao ao amin'ny Actualidad Gadget, Izahay dia manome anao ny sasany amin'ireo gadget mahaliana indrindra homena amin'ny Fetin'ny ray, jereo ary gaga amin'ny rainao tamin'ny fomba tena izy.
Toy ny mahazatra, ary mifanaraka amin'ny tsipika famoahan-dahatsoratray, ao amin'ny Actualidad Gadget dia tsy manolotra afa-tsy ireo vokatra izay efa nohaninay tao amin'ny tranonkalanay izahay ary mahafeno fenitra avo lenta izany, ary tsy mitsahatra mitadidy ny tahan'ny kalitaony / vidiny.
1 Headphones sy akanjo azo anaovana
2 Ireo mpandahateny mahay sy atiny multimedia
3 Fialamboly sy kojakoja
Headphones sy akanjo azo anaovana
Manomboka amin'ny tolo-kevitry ny headphones izahay, ary amin'ity tranga ity dia mankany amin'ny iray amin'ireo vokatra farany izay nohaninay izahay, ny Huawei FreeBuds 4i, headphone izay misy tombony maro izay efa ananan'ny Huawei FreeBuds Pro, saingy misy fifandraisana ny kalitao / vidiny tsy azo resena raha jerena ny sasany amin'ireo fitaovana nariany. Manana fanafoanana ny tabataba mavitrika izy ireo, bateria mihoatra ny 7 ora ny famerenana mitohy ary kalitao feo somary avo lenta. Ny vidin'ny fandefasana dia € 69 raha manararaotra ny fihenan'ny € 10 amin'ny tranokala ofisialin'i Huawei izahay.
Vidio Huawei FreeBuds 4i amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Amazon.
Raha ny zavatra tadiavinao dia vokatra hafa PremiumAo amin'ny Actualidad Gadget dia nanandrana koa ny headphone fanafoanana ny tabataba. Amin'ity tranga ity, ireo izay nanaitra anay indrindra tamin'ny kalitaon'ny vidiny / vidiny dia ny X By Kygo A11 / 800, headphone izay amidy amina loko roa ary manome takelaka fanaka, fanafoanana ny tabataba mavitrika, fampiharana miaraka amin'ny fikirakira azy manokana ary betsaka kokoa amin'ny vidin'ny fandravana 69,90 euro.
Kygo A11 / 800, ny fanafoanana audio indrindra [Review]
Amin'ny lafiny iray, mitodika amin'ny famantaranandro marani-tsaina isika izao, iray amin'ireo "azo anaovana akanjo" malaza indrindra. Miverina any Huawei indray izahay, ary io no Watch GT 2 Pro Izy io dia napetraka ho fitaovana mifanaraka amin'ny Android sy ny iOS. Izy io dia vokatra boribory somary misy akora premium, fehin-kibo mifanentana ary avo lenta ho an'ny fanamboarana noho ny fivarotana miantso azy. Azonao atao ny mahita azy amin'ny 199 euro amin'ny isa amidy sasany, mamela anao hahatratra ny takian'ny kalitao / vidiny.
Ary ny safidy farany dia iray amin'ireo fitaovana farany notsapainay koa, ny Jabra Elite 75t, fakan-tsarimihetsika izay manana famandrihana tsy misy tariby, fanoherana avo lenta, tranga tena kely ary ny tombony azo amin'ny fampiasana Jabra Sound +, eny, Jabra Elite 75t -...
Ireo mpandahateny mahay sy atiny multimedia
Ny mpandaha-teny dia ny filaharan'ny andro ary tsy afaka manatrika ireo tolo-kevitray. Mazava ho azy fa manomboka amin'ny fidirana isika, ny Amazon Echo Dot vaovao, fitaovana iray na eo aza ny habeny "voafehy" dia nitombo be. Ny endrika dia manintona tokoa, azonao atao ny mividy azy amin'ny loko loko telo ary na dia irinao aza ny manolotra anao ny safidy amin'ny fametahana famantaranandro dia ho "rendez-vous" eo amin'ny faran'ny alina rainao izy. Ny vidiny dia 44 euro ho an'ny kinova tsy misy famataranandro, na dia hatramin'ny 59 euro aza ilay kinova misy famataranandro.
Raha toa ka mpilalao haino aman-jery tsara no tadiavinao dia amporisihinay ny Amazon Fire TV Cube vaovao, ny kinova mandroso amin'ny Fire TV OS izay ahafahanao miditra amin'ny rindranasa, mametraka Android APKs, mijery ny atiny Netflix, HBO ary Movistar + amin'ny vahaolana avo lenta (mifanaraka amin'ny 4K). Amin'ny fari-kalitaony / vidiny, io no ivon-toerana fialamboly haino aman-jery tsara indrindra ho an'ireo rehetra nanandramantsika, ny fahamoran'ny fampiasana azy dia eo amin'ny ambaratongan'ny vokatra sisa. Na dia marina aza fa ny vidiny ofisialy dia 119 euro, amin'ny tranga maro dia misy reconditioned tena mora ary manolotra izany toerana izany amin'ny 79 euro.
Toy izany koa, afaka miaraka amin'ireto vokatra ireto izahay miaraka amina feo avo lenta, amin'ity tranga ity dia efa fantatrao fa matetika izahay dia manolotra ny Sonos Beam, izay feom-peo feno indrindra azonao apetraka ao an-tranonao, na raha tsy izany, Sonos Ny iray, ny fomba voalohany hanakaikezana ny tontolon'ny Sonos amin'ny vidiny mirary indrindra, fa satria ivon-toerana multimedia no resahina, nijanona tamin'ny mari-pahaizana kalitao / vidiny izahay ary miloka amin'ny taha ambony indrindra, ny Sonos Arc. Tsy afaka milaza zavatra tsy fantatrao izahay, Dolby Atmos, toerana farafahakeliny, Alexa, Google Home ary Apple HomeKit tafiditra tanteraka ... Ny fialantsiny tokana tsy hividianana azy dia ny vidiny 899 euro, saingy mendrika azy izy, tsy isalasalana.
Nomena anao ny fonosana tonga lafatra hiditra ao amin'ny Alexa izahay ary hametraka ny mozika Spotify na Apple Music anao fatratra, vokatra misy vidiny telo samy hafa ary manatanteraka ny fampanantenany rehetra.
Fialamboly sy kojakoja
Ho fialamboly rehefa miloka foana amin'ny famakiana izahay dia nanomboka tamin'ny Kobo Nia, iray amin'ireo vokatra be soso-kevitra indrindra avy amin'ny tranonkalan'ny rahavavintsika TodoeReaders, vokatra mandeha tsara, miaraka amin'ny toetra mampifanaraka amin'ny vidin'ny fitaovana ary mety hahatonga ny rainao hiditra amin'ny famakiana nomerika, boky elektronika mamonjy vola be dia be izy ireo tena zavatra maro.
Raha takelaka feno no tadiavinao dia sarotra ny mahita fifandraisana tsara kokoa kalitao / vidiny noho ny Huawei's MatePad 10.4. Ireto ny toetra teknika an-tsipiriany:
fitehirizana: 64 GB miaraka amin'ny fanitarana microSD hatramin'ny 512 GB
Display: Tontonana LCD IPS LCD 10,4-inch amin'ny famahana ny 2K (2000 x 1200)
Fakan-tsary mialoha: 8MP Wide Angle miaraka amin'ny firaketana FHD
Fakan-tsary aoriana: 8MP miaraka amin'ny firaketana FHD sy flash LED
bateria: 7.250 mAh miaraka amin'ny entana 10W
fifandraisana: 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C OTG, GPS
feo: Fanamafisam-peo stereo efatra sy microphone efatra
Izany rehetra izany dia amin'ny vidiny manodidina ny 219 euro, tena nanitsy tamin'ny fiheverana ny mampiavaka azy sy ny mety rehetra izay hanolorany antsika amin'ny sehatra fialamboly. Ho fatiantoka, tsy miaraka amin'ny Google Services efa napetraka, fa afaka mametraka azy ireo ihany ianao avy eo.
Izahay koa dia nanandrana mpanadio banga aman-tànana, vokatra tena mahaliana izay manana endrika bebe kokoa. Ohatra iray ity fanadihadiana farany avy any Tineco ity, mpanadio banga aman-tànana afaka manosotra irery. Mampametra-panontaniana hoe inona io karazana fomba fanao io afaka manamora antsika isan'andro.
Tonga i Magic miaraka amin'ny tontonana fotsy ambony. Manana tontonana famandrihana Qi ao anatiny izahay tsy misy tariby izay manome herinaratra 5W, tsara indrindra hialana amin'ny fanimbana ny bateria amin'ny fiampangana amin'ny alina. Isika koa dia manana eto ny bokotra marobe izay ahafahantsika manamboatra sy manamboatra ny Mifoha.
Rafitra mpandahateny sy mikrô
10W fahefana tanteraka
Rafitra stereo 2.0
Fanamafisam-peo feno 1 x 2,25-inch 8W
Fahita matetika: 40Hz - 18 kHz misy fatiantoka latsaky ny 1%
Bluetooth 5.0 kilasy 2 (HSP - HFP - A2DP ary AVRCP codecs)
AirPlay sy Spotify Connect
Multiroom mifanentana amin'ny ES Smart Speaker sy Multiroom range
Azonao atao ny mividy azy amin'ny vidiny tsara indrindra mivantana amin'ny Amazon amin'ny alàlan'ny Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny fanomezana teknolojia tsara indrindra ho an'ny andron'ny ray
FÖRNUFTIG ny fanadiovan-drivotra LOW-COST avy any IKEA
Fandaharana 5 hamoronana GIF haingana sy mora